Inja Leash & Collar Factory - China Inja Leash & Collar Abakhiqizi nabahlinzeki
Izilwane ezifuywayo zithandeka ngempela, futhi umninikhaya angathanda ukuthatha lezi zilwane ezifuywayo ezinhle lapho ephuma ngaphandle. Ngaphandle kokuthi inja ikhiphe ama-collars namakhola, inja ingaya noma yikuphi lapho ingathanda ukuya khona. Ngakho-ke, amakhola wezinja nama-leashes ayizinsiza ezifanelekile zesethi, ezingasetshenziselwa ukuqeqesha, ukuhamba, ukulawula, ukukhomba, imfashini, izipho zokukhuthaza, noma ezinye izinhloso. Izinto zalo ezitholakalayo zilingisa ibhande lenayiloni elukiwe / satin / indwangu nebhande. Ukuthungwa kwendwangu eboshwe nge-Ultra ngentambo mbumbulu yenayiloni enamachashazi akhanyayo + ngesikhumba se-PU. Impahla yama-leashes idinga ukuqina, ngakho-ke ukulingisa ibhande lenayiloni kuyisinqumo esihle. Futhi, izesekeli ezahlukahlukene zingakhethwa njengokugqokwa kokuphepha, ukugoqa okuguqukayo, isilayida sepulasitiki, ingwegwe ye-carabineer nezinye izesekeli ezenziwe ngezifiso. Noma uma ungangeza okunye okokusebenza okungasebenzi kahle, kulungile. Ngokuphathelene ne-logo, izinqubo ezahlukahlukene zingakhethwa kufaka phakathi ukuphrinta kwe-silkscreen, ukuphrinta kwe-offset, i-logo esetshenzisiwe noma ukwelukwa. Ubude baso bunosayizi ojwayelekile, kepha uma bunosayizi owenziwe ngezifiso, nawo uyamukelwa. Uma usenakho okunye ukungabaza, shiya kithi futhi masinikeze iziphakamiso zobuchwepheshe. Misa ukungabaza futhi uxhumane nathi ngokushesha.
Inja Leashes Namakhola